I-Duodenal isilonda esibonakalayo ngokuqhelekileyo kungekhona kuphela kubantu abadala, kodwa kubantwana besikolo nakwi-adolescents. Ukutya okungalunganga, ukungalingani kakuhle, imeko ezixinzelelekileyo zizinto eziphambili ekubonakaleni kwesilonda. Ziziphi iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo nesilonda se-duodenal sinokufumaneka kule nqaku.
Izibonakaliso zesilonda se-duodenal.
Isilonda esona siqhelekileyo sisenzeka kubantwana abadala. Isizathu sesi sifo sinokungondleki (ukungavumelekanga, ukutya okunokulinganisela, ukutya okukhawulezileyo, amanzi aphethwe yi-carbonated), iimpawu zokusebenza kunye nesakhiwo seendlela zesisu, iziganeko ezixinzeleleyo, kunye ne-bterikhi ebizwa ngokuthi i-Helicobacter pylori.
Kukho isifo sokulamba, ubuhlungu besantya kwisisu, ukuhlanza, ukubetha. Kukho nokuba neengxaki ezinjengokuphuma kwamanzi, ukuhamba kweemoto-reflux (ukuhamba okutyayo kwelinye icala), kunye ne-stenosis (ukuhla kwe-lumen yamathumbu).
Ekufumaneni nasekukhuseni izilonda zesilonda, ingcali ikhetha ukutya okufanelekileyo ukuxakeka kwimeko.
Ukutya 1a , inzima kakhulu. Zonke iimveliso zihlambulukileyo, i-liquid okanye i-semi-liquide, i-omelets, amaqanda atyhidiweyo, isobho kunye nosanhlamvu. Ukutya 6-8 ngamaxesha. Ukuba imeko yesigulane iphucula, ugqirha uyalela oku kutya okulandelayo.
Ukutya 1b . Ekudleni kongeza i-cottage cheese, iifatata ezifihliweyo, kunye nezitya zokutya ezivela kumkhuhlane.
Kwaye ekugqibeleni, ukutya 1 . Lona lide kakhulu, lugqithiselwe kungekhona nje ukunyanzeliswa kwesilonda sesisu, kodwa senziwa njengeprophylaxis kuzo zonke izigulane ezinezilonda. Ukutya 1 kunqunywe kwithuba leenyanga ezintathu ukuya kunyaka. Ngokungafani neyesibini zokuqala, kuyahluke kakhulu. Kweemveliso ezivunyiweyo zokutya ezimbini zokuqala zifakwe inkukhu ebilisiwe, i-cutlets yenkukhu, i-meat stroganoff kwenyama ephekiweyo, isobho ngekhilimu omuncu kunye neklabishi, isonka esimhlophe esimisiweyo.
Ukutya kunye nesilonda esiyinkimbinkimbi yecenosis.
I-stenosis ibonakalisa ngokuhlanza rhoqo. Oku kubangelwa ukuba ixabiso elikhulu lokutya lilibazisekile esiswini ngenxa yokunciphisa i-lumen ye-duodenum (ibhenwa yenziwa kwindawo yesilonda, esingafani nesisundu se-muscle).
Ngale nkcenkceshe, ukutya kunzima. Imiphumo yemichiza kunye nemichiza ibuyisela amanzi kunye ne-vitamin balance, elalilahlekile ngenxa yokuhlanza. Ekudleni kwesigulane kuqaliswa ukutya okuphezulu kweekhalori kunye nomxholo weeprotheni zobisi, iiprotheni zezilwanyana, i-carbohydrates, i-juice yezithelo kunye nokutya okunokusetyenziswa ngamavithamini kunye neemaminerali.
Kananjalo ekudleni kukho ukutya okuqinileyo okuye kwafumana unyango olukhuselekileyo lwezonyango. Inyama enomdla ngokuphindaphindiweyo, apho i-souffle kunye nama-meatballs ayilungisiwe, amaqanda atyilisiweyo okanye ngendlela ye-omelette. Njengomdyuli - i-dessert, i-jellies, i-kisels. Ukuphucula amathambo aqeshe i-no-shpu okanye i-papaverine, enceda inqanaba elingcono lokutya. Emva kokuphucula imeko kunye nokunciphisa i-stenosis, isigulane sitshintshela ekudleni 1a.
Isondlo esifanelekileyo kunye nezilonda zesilonda ngegazi.
Kwiiyure ezilishumi elinambini zokuqala emva kokuphuma kwegazi, kunokutya, okubandakanya iimveliso ezinciphisa umsebenzi weengxathu kunye nesisu esiswini, ukunciphisa imithwalo yegazi. Esi sondlo sithathwa ukuyeka ukuphuma kwegazi. Iquka ukhilimu ocolileyo, ibhotela, ubisi. Ukuba ukuxhatshazwa kunzima ngokuhlanza, oko kukutya kuthatyathwa yintlavenous yokudliwa kwamavithamini adingekayo kunye nezondlo kumzimba.
Kwiintsuku zokuqala emva kokuyeka ukuphuma kwamanzi, kuvunyelwe ukuba badle ubisi, ibhotela, i-porridges yobisi (abilisiwe emanzini kwaye ahlanjululwe ngobisi), isixa esincinane sesonka esimhlophe esomileyo, iizambane ezifihliweyo ebisi, ii-juice zesithelo ezihlanjululwe ngamanzi. Ukutya kusoloko kuphuculwa ngamavithamini K no-C ukuphucula i-blood clotting nokunciphisa ukuphelelwa kwemithambo yegazi. Emva kokuba imeko yesigulane iphucula, ukutya kuguqulwa kube ngu-1a.
Ngonyango olufanelekileyo kunye nesondlo esifanelekileyo, kwiimeko ezininzi kunokwenzeka ukuba ugweme ukuhlinzwa kunye nokunciphisa umngcipheko weengxaki eziphindaphindiweyo.
Yintoni ekufuneka ibe kukutya kwabahlengikazi
Yintoni omele uyidle ebusika ukuze uhlale kakuhle kwaye ungaguli?
Ukutya kweentsuku ezintathu u-Alicia Silverstone
Umntwana onobugcisa: khetha iingubo kwi-prom in bakala 4
Ukutya ukuze unciphise ubunqunu kunye nesisu
Ukukhulelwa: iiveki ezi-4
Ukuhlaziywa komzimba: zokupheka zemvelo zendalo yobuhle
Imincintiswano kunye novuyo ngokubambisana ngo-Matshi 8
I-Collagen njengenxalenye yesikhumba
Iikhenkethi zeKrisimesi kwiprotheni glaze
Indlela yokutya kakuhle umntwana emva komnyaka?
I-dystonia ye-Vegeto-vascular kubantwana